Creative Writing » သခင်ဘလက်ချော ရဲ့ အလုံးကြီးများ (၁)	26
တောင်ပေါ်သား says: ကျုပ်လည်း ဝင်ပြောပြီးမှ သတိရတယ်
ရာမည says: ခွမယ်
ခွမယ် အာဟိ အာဟိ
manawphyulay says: အရေးထဲ ဆိုက်ကားဆရာနဲ့ လာတွေ့နေတယ်…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 36
apolo11 says: အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး အရှိန်အဟုန်ရပ်တန့်သွားစေဖို့နဲ့
Wow says: သခင်ဘလက်ချော ဆိုတော့ သခေါဘလက်ခြင်ပေါ့နော် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4010
manawphyulay says: အရင်တုန်းကတော့ သခင်မျိုးဟေ့ တို့ဗမာ…..
ခုတော့ သခင်မျိုးဟေ့ တို့ဘလက်… လို့ဆိုလိုတာလား…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 5021
Mr. MarGa says: သိဘူး
ခင်ဇော် says: အရှုပ်တော်ပုံ
Mr. MarGa says: ကိုယ့်ကိုယ်ကို တော့ ယုံသေးသားပဲ
ခင်ဇော် says: ဒီ တစ်ခုပဲ ယုံတာနော်။
Mike says: .ဘာလဲဗျ…ခီများကဆြာဂျီးလား
.နားစွန်နားဖျား သခင်ဂျီးကို ဆန့်ကျင်ဂျ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7172
Mike says: .ဒါနဲ့…သခင်ဘလက်ချောရဲ့ အလုံးကြီးများဆိုဒေါ့…မဲမဲဂျီးပေါ့နော် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12069
Alinsett@Maung Thura says: အရီးဒေါ်ပုံ …အောင်ရမျီ…
အရီးဒေါ်ပုံ…. အောင်ရမျီ… ဒီတစ်ခါ စာမေးပွဲမှာမှ အရီးဒေါ်ပုံ မအောင်ရင်..
naywoon ni says: ကျုပ်​တို့က​တော့ ရှင်းရှင်းဘဲ ။ မတရားမှု မှန်​သမျှ သီးမခံဘူး ။ မနိုင်​ရင်​ ​ချောင်းရိုက်​မယ်​ ။ ​ချောင်းရိုက်​လို့မရရင်​ fb ထဲက​နေ က​လော်​တုတ်​မယ်​ ။
black chaw says: ကွန်းမန့် ၀င်ရေးသွား ကြသူအားလုံး
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .ကဘချောရဲ့ ပို့စ်ကို ထုံးစံအတိုင်း ဟာသရေးမယ်ထင်လို့ မဖတ်မိဘူး။ ဟိုဘက်က ပို့စ်မှာ မန့်ခဲ့တာကိုပြန်ပြီး ပြောပါရစေနော်။
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: ကျုပ်​နာမည်​က ကျုပ်​​ကောမန့်​ပါပဲဗျာ
naywoon ni says: ဘာသာ​ရေး လူမှု​ရေး စီပွား​ရေး လူမှု​ရေး ​နိုင်​ငံ​ရေး ​တွေမှာ အစွန်း​ရောက်​​တွေများ​နေပြီ ။ ဒီ​တော့ ဆီး​ဆော ကစား သလို​ပေါ့ဗျာ ဘဲလ်​လင့်​ ညီ​အောင်​ ကျုပ်​က အခြား တစ်​ဘက်​စွန်းက ၀င်​ထိုင်​ကြည့်​မလို့ ။ ( တဂယ်​က ၀န်​ထိုင်​ခြင်​လို့ ဂို ၀န်​ထိုင်​ဒါဗျာ ကွာမျူနစ်​လို့ ​ပျောသူ ရန်​သူ )
Ma Ma says: (ခင်ဗျားတို့ သွေးကွဲစ ပြုနေပြီဆိုတာကိုရော သတိပြုမိကြပါရဲ့လား။)
မြစပဲရိုး says: ကိုယ့်မောင် က စိုးရိမ်တကြီး ရေးထား တဲ့ မို့ ချက်ခြင်း မန့်မယ်ဗျား။ တစ်ပါတ်လုံး အကြွင်းအကျန် နဲ့ Frozen တွေ ချည်း မို့ ဒီနေ့ ဟင်းချက်ပေး မယ် ပြောထားလို့ ကျန်သူ များ အိမ် ကို နောက်မှ အေးအေး ဝင်လည် ဗျစီ။
ခင်ဇော် says: နားးလည်ပါ့ဗျားးး
black chaw says: @ အရီးလတ်, မမ, ၀င့်ပြုံးမြင့်, ခင်ဇော် ;;;;;;
ခင်ဇော် says: ထောက်ခံသူ
အစိတ်စိတ် အမွှာမွှာ ကွဲတော့ အေးးးရောာာာ Was this answer helpful?LikeDislike 2706
ကထူးဆန်း says: ဘာဘဲ ပြောပြော ရွာ လူ နဲ နဲ ပြန်စည်လာလို့ သဂျီးတော့ ပြုံးဖြီးဖြီး ကြီး ဖြစ်နေမှာ မြင်ယောင်မိသေး ..
black chaw says: @ ကထူးဆန်း ;;;
ဦးကြောင်ကြီး says: ကွဲမှတော့ ထင်ထင်ရှားရှား ဖြစ်အောင် ဆိတ်စွမ်းအားရှင်တွေကို တာဝံလက်ပတ်နီ ထုတ်ပေးလိုက်ပါ ဦးဗီလာဘ်…။